Test imele imishini ucwaningo zenzelwe ukwamukela ezahlukene, ukulawula, ukuhlolwa okukhethekile kanye izinto isiqoqi sama-softwe. Ingqikithi yalo yokuhlola ukuhlonza ofanayo langempela futhi ilayisha esiphezulu. Cabangela izinhlobo amadivaysi ezinjalo kanye nezici zabo.
Test basebuhlotsheni ukumisa ejwayelekile - a eziyinkimbinkimbi ehlanganisa luhlaka, vibratory, wokubacindezela, noma ezinye yesistimu yokusebenza, ukulawula, amadivayisi wokulinganisa, amadivaysi ezengeziwe.
Ihlola kudivayisi noma ngalo mshini ukuma ivumela ukulinganisa nemingcele eziningi kanyekanye, ezithinta into. Emhlabeni wangempela ukuhlolwa okunjalo cishe akunakwenzeka ukuba afeze. Ngemva kovivinyo imingcele awashintsheki. ukungasebenzi Ezimisele unit noma ukuhambisana yayo egcwele nge imingcele edingekayo. Le ndlela kwenza isikhathi ukuhlonza nekugwema ukukhubazeka kwesakhiwo.
Injongo kanye nokusetshenziswa test amabhentshi
Ukusetshenziswa amathuluzi olucutshungulwayo kunomthelela izici ezilandelayo:
Inikeza ukonga amandla.
Imiphumela isici womuntu ngenani izinqubo.
Okuthuthukisiwe izimo zokusebenza ngenxa ezishintshayo inqubo control.
Njengomthetho, ukulawula kanye test Rig evumela ukusetshenziswa izikhundla ezintathu eziyisisekelo:
Ukuze siqhube design nocwaningo izindawo.
Nquma ukuthi kungenzeka ukwenza noma silungisa onobuhle ukukhiqizwa ezidinga ukuhlolwa noma Samandla njalo.
Ukusebenza kwezinhlelo imishini ngesikhatsi kokuhlinzwa.
Esigabeni ngasinye has eziningi ukuhlolwa lezo ngokuvamile eyenziwa izindlela ezijwayelekile. Ngemva ukuqaliswa ezihlelelwe algorithm okuzenzakalelayo kwenza kube nokwenzeka ukuhlola iphuzu zezibalo umbono nemingcele eziningana into ilawulwe. Ngebanga lalokho, lokhu kwandisa ukukhiqiza, ukunemba kanye nokwethulwa ngokuyiko kwezinhlelo idivayisi. Ngo ukuhlolwa amabhentshi lanamuhla ezenzakalelayo enikeziwe operation-matrix, okuyinto emva esifushane kuletha zonke ukufundwa esibukweni nge umbhalo.
amadivaysi okuzenzakalelayo enze kube nokwenzeka ukuba uzisebenzise ne sakugcina opharetha ukuzibandakanya. Ngokwesibonelo, i-software ukuhlolwa kanye analogue yayo wasebenzisa isofthiwe uhlelo olukwazi ukuhlolwa amayunithi cishe edingekayo.
Ubuchwepheshe obunjalo inikeza eziningi eziwusizo, okuyilezi:
Kwenzeka ezizimele iziteshi usuke nesilinganiso.
izilungiselelo amandla zihlala zinjalo.
Isifundo zithathwa ngokuzenzakalelayo futhi afakwe lwamakholi nesilinganiso.
Amasethingi Test akhethiwe ngokuhambisana nemibandela kanye nezici yokuqinisekisa.
Kule ndaba, imishini yokuhlola ebhentshini siqukethe kumadivayisi alandelayo:
Spectrum analyzer ophethe amasignali analog engenayo into zihlolwe.
Yokukhulisa umsindo ukuthi ziyadingeka ukuze uthuthukise ulwazi engenayo ifomu ishayela.
Ukushintsha ama-unit. Lendawo kuvumela idatha test engenayo analyzers ekhethekile, kungakhathaliseki wokuxhumana esetshenziswa.
imithombo yamandla ukuthi ukukhonza ukwenza kusebenze ukuma noma izingxenye kudivayisi ngaphansi kovivinyo.
Multimeters, amakhadi kanye converters. Ikhonza njengabameleli stabilizers futhi normalizers, ukuqinisekisa ukusebenza evamile ngaphandle izinguquko voltage noma ngenxa yezinye izizathu.
Kufanele kuqashelwe ukuthi kagesi ukuhlolwa amabhentshi zingahlangana ezingxenyeni eziningi in iphasela single. Lokhu kukuvumela ukuba uhlole cishe yonke imingcele edingekayo into zihlolwe.
Uhlelo luyasetshenziswa kwezinye uhlelo zezitsha ZETVIEW okubandakanya ukusetshenziswa eziningi block matrices. Imishini okukhulunywa singenziwa nje lunye noma ukuhlola uhla eligcwele izici kungenzeka.
Universal test ebhentshini
La mathuluzi Samandla ukuvumela ukuhlolwa amadivayisi anezici efanayo. I-opharetha nje ukhethe into efanele ohlwini bese lilungiselele idivayisi ukuze imingcele edingekayo. izinguquko kuvame ngaphansi imvamisa, uhla ashukumisayo, inani izinkomba aqinisekiswe futhi iphutha imikhawulo.
Amadivayisi anjalo anemisila esibonakalayo eyinkimbinkimbi evumela ukuthi umsebenzisi ukuze ulungise izilungiselelo software. Uhlobo ezifanayo zezitsha - sici-ocebile version. Ziklanyelwe ukuba usebenze izindlela eziningana. Phakathi kwabo:
Ukuze ulungise ukusebenza efanele zedivayisi kuyodingeka ukhethe indawo efanele. Amadivayisi anjalo ukuvumela opharetha ukukhetha Uhlelo oyifunayo futhi ukuhlola into. Ngemva kwalokho, uma kunesidingo, kungaba reconfigure imodi elandelayo.
Umfutholuketshezi test ebhentshini kwenza ukuhlolwa izici okuhambisanayo of abasabalalisi yokukhulisa umsindo. Ngenxa yalokho, amandla ukufundwa elotshiwe izici, kwenzwa, amplitude isignali ngobulili kanye nezinye eziyisisekelo yokusebenza nemingcele. Unit siqukethe ukulawula ama-valve, okuyinto evulekile naseduze kuye focus zokuhlola. Ngamadivayisi enjalo, ungakwazi ukuhlola amapharamitha alandelayo amadivayisi wokubacindezela:
ukuqapha amadivaysi yomsebenzi.
Ukusebenza izinjini futhi izakhi asizayo.
Izici wokubacindezela test ukuma
Idivayisi kuncike uyalandisa ngokuyinhloko emkhakheni isiqoqi sama-softwe. Ingase futhi ingasetshenziswa ukuhlola ukulawula ama-valve, yokukhulisa umsindo electrohydraulic, nezinye amayunithi ifakwe uhlelo efanelekayo.
Test ebhentshini Isikimu okuyinto abekwe ngezansi ibonisa ukuthi idivaysi kungabuye ifakwe-control unit. Lokhu kukuvumela ukuhlola transducers electromechanical. Bona kulinganiswa imingcele phakathi amplifier unit and okukhipha imingcele kanye isimo motor wokubacindezela.
Kulezi ukushintshwa inkomba isivinini kunqunywa usinika imisinga okokufaka EMF ka polarity ezahlukene nokubaluleka. Lokhu ucabangela ijubane ukunyakaza wesabelo okukhipha yenqubo motor futhi ilawulwa ngomvimbo ilungu eveza.
Izici ezimbi zalamaqembu.I zihlanganisa ubude besikhathi eside kakhulu izilinganiso, ikakhulukazi izindleko ezincane ukuthi unokuqukethwe ongaphakeme ulwazi.
Noma kunjalo, leli cebo ngcono wokubacindezela test ukuma ikuvumela uhlole hhayi kuphela injini core, kodwa futhi amayunithi alo ahlobene, kanye namandla. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukwenza nge-imigqa wokubacindezela, ngaphandle kokuba sokukhipha eziwuketshezi.
Inani ukuhlolwa ukuma kuxhomeke ezicini eziningi. Okokuqala, izindleko kuthinta uhlobo idivayisi. Ngokunengqondo, imishini yesimanje ezenzakalelayo izobiza eziningi ezibizayo. Noma kunjalo, kukhona bekwazi ukuhlolwa imiphumela yawo wonke imingcele edingekayo ngqo esikrinini ngemizuzwana.
ukulungiswa ezisetshenzisiwe angathengwa ruble ayizigidi 85. Kumayelana umfuziselo silula. Izinketho elikhiqizayo kungadla ezingaphezu kuka-5 million. Kumele kuqapheleke futhi ukuthi lezi amayunithi hhayi kuphela ukunikeza ukuqinisekiswa izinto okwaxoxwa, kodwa futhi iqhaza ingxenye isiqinisekiso ukuphepha kanye nekhwalithi imikhiqizo. Ngakho-ke, ukuhlolwa amabhentshi - kungcono eyodwa yezindlela eziphumelela kakhulu ukuthuthukiswa kanye nokuqapha ekhona amathuluzi, amadivayisi kanye nezindlela.
«Veni, vidi, VICI» - umusho iminyaka